Vavaka hitahiana ny sakafo. ? [sy sakafo ho an'Andriamanitra]
Vavaka hitahy ny sakafo Fomban-drazana io ka mijanona ho manankarena mandraka androany amin'ny fianakaviana rehetra.
Izy io dia tafiditra ao anatin'ny fanofanana zaza ary zavatra izay na dia any am-pianarana aza dia ampiharina toy ny fampianarana.
Ny maha zava-dehibe ny fanaovana izany vavaka izany dia amin'ny fankasitrahana, amin'ny fanomezan-danja ny sakafo azontsika lanin'ny sy ny fangatahana ho an'ireo tsy manana.
Fihetsika sy fisaorana ho an Andriamanitra no manome antsika hery handehanana hiasa, hividy sakafo, manome antsika fahendrena hanomanana azy ireo sy fitahiana ny fananana fianakaviana hizara azy ireo.
Amin'ny tranga izay tsy misy fianakaviana eo amin'ny latabatra, dia mbola mila feno fankasitrahana ihany isika satria misy olona tsy mahazo misakafo, izay tsy noho izy ireo tsy manana, fa noho izy ireo tsy afaka noho ny antony ara-pahasalamana na toe-javatra hafa, izany dia tokony hahatonga antsika hahatsapa fankasitrahana sy iray Ny iray amin'ireo fihetsika maneho izany dia ny manao vavaka kely alohan'ny hisakafoanana.
1 Ny vavaka mba hitahy ny sakafo Matanjaka ve?
1.1 Vavaka hitahy ny sakafo
1.2 Vavaka hisaorana ny sakafo
1.3 Vavaky ny sakafo
2 Tokony hivavaka daholo ve ny vavaka rehetra?
Ny vavaka mba hitahy ny sakafo Matanjaka ve?
Ny vavaka rehetra dia mahery raha toa ka efa mino ny heriny.
Ny mitso-drano ny sakafo dia fihetsika izay tsy vitan'ny hoe misaotra fa mangataka sakafo hihinana tsara ao amin'ny vatantsika, hanome, mba tsy hijanonany ho eo amin'ny latabatra ary hanome antsika tombontsoa ara-tsakafo Ento ny tsirairay amin'izy ireo.
Ho setriny kosa dia afaka manontany ho an'ireo sahirana isika ary tsy manana sakafo eo ambony latabatra, izay tsy mahazo mihinana sakafo kely ihany, mangataka ireo izay tsy tokony hanome ny zanany, ho an'ireo noana ary tsy manana loharanom-baovao hanatratrarana azy.
Matanjaka ny vavaka hitahy ny sakafo sy ny sakafo satria misy ny finoana.
Araka ny hitanao dia tsy fisaorana fotsiny ny sakafo fotsiny dia fihetsika maneho finoana sy fitiavana ny hafa izay mametrahantsika ny toeran'ny hafa ary mangataka ny filàny.
Rehefa misy vavaka iray ampahafantarina ny filan'ny hafa ary mangataka ny fitovianay isika dia mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika.
Tompo Andriamanitra; haino aman-jery ka raha ao amin'ity latabatra ity dia misy fifanakalozana eo amin'ny fraternaly eo anelanelan'ireo vahiny;
Mpanolotsaina amin'ny sakafo nomenao anay anio hanasoavana;
Izay tsy mbola nihinana dia manandrana ny vokatry ny fahariana mahafinaritra nataonao.
Izahay dia tia anao Andriamanitra Ray, ary misaotra anao mandrakizay izahay noho ny fizarana an'ity anio ity.
Afaka manomboka manomboka ny vavaka isika amin'ny fisaorana ny fotoana omen'Andriamanitra antsika mba hahafahanay mamahan-tena tsara.
Avy eo isika dia afaka mangataka ilay olona izay nanana olana mba hanomana ny sakafo hahafahantsika mihinana azy, ho an'ilay iray izay nanampy tamin'ny dingana rehetra mba hahatongavan'ireo sakafo ireo eo amin'ny latabatray.
Mangataka ny tsy manana sy mangataka ny mofo isan'andro isan'andro ao an-tanan'ny olona isika ary, farany, misaotra indray ny fahagagana eo amin'ny fiainana izahay.
Vavaka hisaorana ny sakafo
Ray masina; anio dia manontany anao izahay
Enga anie ianao hiaraka aminay amin'ity latabatra ity ary hitahy ny mofo izay hanandrana vetivety; Midika izany fa ireo no vokatry ny fahasalamantsika Ary aza ilaozanao izay miady mafy hahazo moto.
Misaotra anao izahay, Tompoko, ary fohy ny fahasoavantsika noho ny hasehon'ireto sakafo ireto!
Contágianos ny fitiavanao sy manazava ny lalana izay mitondra anay mankany amin'ny efitranonao.
Ny fankasitrahana dia toetra iray izay vitsy no mampiseho ankehitriny, miaina ao anatin'ny tontolo izay mandeha haingana isika ary vitsy dia mijanona misaotra.
Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy tantara milaza ny tantaran'ny boka sasany izay nomen'i Jesosy ny fahagagana fanasitranana ary iray ihany no sisa nisaotra.
Matetika izany no mitranga amin'ny fiainantsika.
Ny momba ny fisakafoanana ihany, ny famahanana ny tenantsika fa tsy ny fisaorana fotsiny dia zavatra tsy maintsy ilaina eo amin'ny fiainantsika izany.
Vavaky ny sakafo
Misaora anio, ry malala, ho an'izay rehetra eto amin'ity latabatra ity;
Misaora izay efa nahandro hanina; Misaora izay namela azy ireo ho tonga eto; Hotahiny, ho fanampin'izay efa namboly ny tsirairay amin'ireo.
Ray masina ô! Noho ny vintana nomenao anay anio, dia mankasitraka fatratra isika ary miaraka amin'ny halemem-pinoana tsy manam-petra sy ny fiderana ny mofo izay napetranao teo ambony latabatra androany.
Ny ohatra tsara indrindra amin'ny fivavahana amin'ny sakafo dia hita ao amin'ilay Jesosy izay avy any Nazareta izay nisaotra ny sakafo efa laniny.
Misy fahagagana miandry vavaka mba hahatongavanay eto ary ny fahagagana amin'ny sakafo isan'andro dia mety ho iray amin'izy ireo.
Amin'izao vanim-potoana izao izay toa sarotra be ny fisaorana amin'ny alàlan'ny vavaka iray ny tombontsoa hananana ny sakafo ilaintsika dia fihetsika maneho finoana sy fitiavana an'Andriamanitra.
Tokony hivavaka daholo ve ny vavaka rehetra?
Mila mivavaka iray ihany ianao mba hitahy ny sakafo indray mandeha alohan'ny sakafo. Ny zavatra azonao atao dia ny mivavaka vavaka samihafa isaky ny sakafo.
Mety miovaova isan'andro, isan-kerinandro, na isam-bolana.
Tsarovy lalandava fa ny zava-dehibe dia ny finoana an’Andriamanitra Tompontsika. Ny finoana sy ny finoana no fototry ny vavaka rehetra.